Traintravel Archives | Gcina A Isitimela
Ukuhamba nokufumana iindawo ezintsha kusinika amaphiko okuphupha, Duma, kwaye ufunde. Kwilizwe elikhulu kangaka, phantse akunakwenzeka ukuba ubone yonke into, kananjalo akunakwenzeka ukuba ube namava kwaye wonwabe kuyo yonke indawo eYurophu. Ngeendawo ezininzi ezinomdla, you can only…
Ukuya eYurophu kubuyela umva ngexesha kumhlaba obanziweyo wamabhotwe, amahlathi, kunye neyona ndawo intle kunye neendawo ezinamanzi. Nokuba uhamba e-Itali okanye eSwitzerland, ukucwangcisa a 2 uhambo 'lweenyanga, okanye ube neveki kwilizwe elinye laseYurophu,…
Ukuhlala ukwimo xa uhambela ngaphandle kwamathandabuzo kuyingxaki. Ukutya okuhendayo kuhlala kunikezelwa. Oku kudityaniswa nekhefu kwindlela yakho yesiqhelo yokuzivocavoca ekhokelela ekuweni kweenqwelo zokuzilolonga. Ke umntu uhlala njani elungile ngelixa ehamba? Yinto…
Ngaba wakha wazibuza ukuba yintoni kunjani ukuba ukuqwalasela, wayemangalisiwe, iifestile umfanekiso elikhulu njengoko uhamba umhlaba? Kuthekani ukuba zenza ukuba balala sinyikimisa ngcembe kololiwe njengoko trundles phantsi a track? Train travel is a very common…